I-WIFI efihliweyo yokuHlola ikhamera ye-Alarm Clock, isiCwangciso seKhamera yeLog yeLop yeVidiyo (i-SPY203) | Izisombululo ze-OMG
I-OMG WIFI efihliweyo yokuHlola ikhamera ye-Alarm Clock, isiKhuseli seKhamera yeLog yeLop yeVidiyo (i-SPY203)
「I-WIFI i-Spy Camera Ikhamera ekhethekileyo」I-HD 1080P i-WiFi iwashi yekhamera efihliweyo ifihliwe kwinto ekhangeleka njengeeyure eliqhelekileyo. Inkxaso yeH264 Recorder yevidiyo, i-Max 128GB ikhadi le-SD, iindlela ezininzi zokugijima: iWifi / i-P2P / Ukurekhoda kwikhadi le-SD (ikhadi le-SD lingabandakanyi). Ungayifaka le IP ukuhlola ikhamera efihliweyo kwidesksi. Ayibonakali ngokupheleleyo xa ikhamera ibhalwa.
IF I-WIFI SPY EFIHILEYO IKHAMERA NOKULULA UKUSETYENZISWA 」Landa ifowuni kwiifowuni ze-iOS kunye ne-Android uze usethe ikhamera ye-clock ye-clock kwi-intanethi yakho, ngoko unako ukujonga okukude ngexesha levidiyo yangempela ukusuka naphi na.
IMODE YOKUJONGA IINKCUKACHA NOKUREKHODA AMANQAKU 」Izaziso zeAlarm ziya kutshintshwa kwiselfowuni yakho emva kokuba isilumkiso sisebenze, kwaye siya kuthatha ividiyo kwi-APP. Xa imemori khadi igcwele, ifayile entsha iyakubhala ngaphezulu ifayili yangaphambilini, kwaye ifowuni iya kuqhubeka irekhoda ngokurekhoda okuqhubekayo.
IFOMATI EXINISIWEYO NOKUPHAKATHI KWEBATTERY 」H.264. Imemori yeememori ye-128GB inokugcinwa malunga nevidiyo ye-15days. Iwashi yekhamera ye-alarm ye-alarm ene-battery ine-battery ye-3000mAh engakwazi ukurekhoda ividiyo malunga neeyure ze-10 emva kokuhlawulwa ngokupheleleyo. Ifowuni ixhasa nokurekhoda ngelixa uhlawula ukuze ungadingi ukukhathazeka ngebhetri ephumayo kwaye ulahlekelwe ixesha elibalulekileyo.
Ikhamera ye-Alarm Clock ye-Warm efihliweyo inesipele esifihliweyo kwaye ivelise iVidiyo yeMibala yeHD nge-lens yayo engange-90 ububanzi, ekuvumela ukuba ubone ngqo ukuba kwenzeka ntoni xa uphumile kwikhaya lakho, eofisini, kwishishini, okanye nayiphi na indawo apho ufuna ukhuseleko.
Le khamera ifihliweyo ijongeka inemfashini kwaye isebenza ngqo njengewotshi yealam. Esi sixhobo sincinci kwaye sinecompact, ngoko sidibanisa ngokugqibeleleyo ngaphandle kokubonisa ukuba yikhamera efihliweyo.
Ividiyo ekhompyutheni ye-Wi-Fi: Ukubeka idivayisi yakho kulula, Unokubeka iliso ikhaya lakho, iofisi okanye uthengise nayiphi na ifowuni yakho kungakhathaliseki ukuba ude kangakanani ifowuni ixhunyiwe kwi-Wi-Fi okanye i-3G / 4G LTE . Ungasebenzisa ikhamera njengendlela yokubeka iliso lomntwana, ikhamera ye-nanny, okanye i-monitor yezilwanyana ukuqinisekisa ukuba yonke into iphephile kwaye iphilile ekhaya lakho.
1. I-Wi-Fi ekude
2. Ukufumanisa Ukuhamba
3. I-HD 1080P yeVision Resolution
4. Loop Ukurekhoda
5. I-H.264 Ifomathi egxininisiweyo
Iwashi ye-alamu ayifaki.
Ubungakanani bephakheji: 7.4 x 5.2 x 2.7 intshi
Into yobunzima: I-14.6 ounces
I-SPY203 -WIFI Ikhamera yeAlarm Clock Footage
10262 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-18 Namhlanje